Executive Diploma in Business Management (CSR) EDBM-CSR ﻿
Tags: jobsinyangon-trainingschool-certificate-management level
Executive Diploma in Business Management (CSR) EDBM-CSR အတန်းကို စမ်းချောင်း Campus မှာဖွင့်ပေးပြီး လှည်းတန်းမှာပါ ဖွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာကြတဲ့ ကျောင်းသား/သူများအတွက် လှည်းတန်း Campus မှာလည်း EDBM CSR အတန်းလာပါပြီ
သင်တန်းကြေး (၅၀ % CSR ခံစားခွင့်) ( )ကျပ်ဖြင့် လစဉ် ၃-သောင်းကျပ်( )သာ ပေးသွင်းပြီးဂတက်ရောက်နိုင်မည့် UK Diploma EDBM (CSR) အခွင့်အရေး
MESI သင်တန်းကျောင်း၏ Diploma သင်တန်းသားပေါင်း (၁၅၀၀) ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်... ယခုအခါ CSR လူမှုအကျိုးပြု ဒီပလိုမာသင်တန်းများအား စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
အပြိုင်အဆိုင်သင်တန်းတွေတက်နေတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ UK ဒီပလိုမာတွေကို ရယူထားပြီး… အလုပ်မှာ (ရာထူးတိုး၊ လစာတိုးနိုင်ဖို့) ရယ်၊ မကြာမှီ ၀င်ရောက်လာတော့မဲ့ (နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ) နေရာရယူနိုင်ဖို့အတွက် ယခုပဲ MESI နဲ့ ဆက်သွယ် ပြီး ကျောင်းလာတက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေတက်ရောက်ထားသင့်လဲ... ? ? ?
> Graduated ဘွဲ့ရ အလုပ်ရှာဖွေနေသူများ
> Company လုပ်ငန်းခွင်ဝင် ပြင်ဆင်နေသူများ
> လုပ်ငန်းဌာန အသီးသီးမှ ကုမ္ပဏီရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲဦးဆောင်လိုသူများအတွက်...အထူးသင်ကြားပေးတဲ့ EDBM (UK) Diploma ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အဆင့်အမြင့် UK Diploma ကို (အချိန်တိုတို အတွင်း အကျိုးရှိရှိ) ဖြစ်အောင် MESI Business Institute တွင် (စာတွေ့ + လက်တွေ့) သင်ကြားပေးနေပြီး သင်တန်းကာလ အချိန် ၅ လ ခွဲ သာ အချိန်ပေး တက်ရောက်ပြီး သင့်အနေဖြင့် အဆင့်မြင့် UK ဒီပလိုမာကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ရယူနိုင်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်။
UK Education Standard အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်အတိုင်း...
> >> စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးမည့် Teaching Style
> >> ဘာသာရပ်အလိုက် Assignment နည်းစနစ်များ
> >> လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး (Industry Visit များ)
> >> အသင်းအဖွဲ့အလိုက် Group Presentation များနှင့်
> >> Student Base Teaching ကျောင်းသားတိုးတက်ရေး အခြေပြုနည်းစနစ်များနဲ့ သင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Human Resource Management - လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
(၂) Marketing Management ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
(၃) Financial Management ငွေကြေးရေးရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း
(၄) Supply Chain Management လုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
(၅) Business Management စီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း
စတဲ့ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမှန်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ဘာသာရပ်ကြီး (၅-ခု) အား EDBM တန်းခွဲတွင် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု UK အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာတွေကို Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI) နှင့် Banbury & Bicester College (UK) တို့မှ အသိအမှတ်ပြုပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
MESI ၏ ကျောင်းသားဦးရေ အတန်းအများဆုံးသော Executive Diploma in Business Management (EDBM) တန်းခွဲသစ် (CSR) အခွင့်အရေး။
(၁-နှစ်) (၁-ခါ) စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးတာမို့...
Don't Miss This Chance (ဒီလိုအခွင့်အရေး လက်မလွှတ်စေဖို့)
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေရာကို ရွေးချယ် တက်ရောက် နိုင်ပါတယ်။
➡️နေရာ။ ။ MESI လှည်းတန်း သင်တန်းကျောင်း။
➡️နေ့ရက် ။ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၂ ရက်နေ့ (အပတ်စဉ် စနေနေ့)။
➡️အချိန် ။ (နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီ မှ ၄:၀၀ နာရီအထိ) ။
➡️ကာလ ။ (၅ လ ခွဲ) ၁-ပတ်၊ ၁-ရက် တက်ရောက်ရမည်
➡️သင်တန်းကြေး ။ မူရင်းဈေး (၄-သိန်း) ကျပ်အား...(C.S.R) သင်တန်းကြေးနှုန်းဖြင့် (၁-သိန်း ၈-သောင်းကျပ်သာ)
➡️စာမေးပွဲကြေး။ ။ စင်ကာပူဒေါ်လာ 226
➡️လူဦးရေ အကန့်အသတ်ဖြင့် (၄၀-ဦး) သာ လက်ခံသင်ကြားသွားပါမည်။
➡️ Contact Us: ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန်.....
ဖုန်း (09 788888 434, 09 7888 99774
,09 7777 32292, 09 777732282)
အမှတ် ၁၅/၁၇ ၊ အခန်းအမှတ် ၆-က ၊ ၆ လွှာ ၊ Bang Bang Condo ၊ ရန်ကုန် အင်းစိန် လမ်းမကြီး ၊ လှည်းတန်း ၊ ရန်ကုန်မြို့။
➡️MESI ၏ Seminar ပွဲ တက်ရောက်ထားသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ...
ဘွဲ့ရမောင်မယ် လူငယ်များသို့ ဦးစားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
➡️လူငယ်များအား အဓိက ဦးစားေးပးသွားပါမည်။
သင်ကြားပေးမည့် ဆရာများ (MESI မှ Professional Trainer အဖွဲ့များမှ အလှည့်ကျ စီစဉ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်)
↪️ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ၊နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီး၊စသည့် မြို့ကြီးများတွင် ဒီပလိုမာသင်တန်း (၃၅)တန်းကို တပြိုင်နက်တည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတာကြောင့်….???
ဒီပလိုမာ ကျောင်းသားပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော် တက်ရောက်နေတဲ့ (မြန်မာ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးသင်တန်းကျောင်းကြီး) ဖြစ်တဲ့အတွက်...
Industry Visit လေ့လာနိုင်ပြီး... ???
Professional ထူးချွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့... ???
အနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ ? ? ?
MESI မှာ ကျောင်းတက်ကြပါစို့။
MESI Business Institute သင်တန်းကျောင်းများ
(ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီး၊ ကျိုင်းတုံ ၊ မော်လမြိုင်၊ မုံရွာ ၊မိထ္ထီလာ၊ ဘားအံ၊ မြစ်ကြီးနား ၊ ထောက်ကြန့်)
အနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ MESI မှာ ကျောင်းတက်ကြပါစို့။